Omunye imikhakha ezibaluleke kakhulu nomnotho emazweni Mediterranean kuyinto ezokuvakasha. inqubomgomo State Turkish kuhloswe ukuthuthukiswa mazombe ke, futhi kuveza imiphumela emihle kakhulu - yisabelo kwezokuvakasha GDP yezwe ilingana 7%.
Indawo ye-Turkey kuyinto ingcebo yawo engokwemvelo. Picturesque Pontic Izintaba ukubiyela ogwini edumile emhlabeni wonke Anatolia, ezinye zazo - Alania (Alanya noma) a emele maphakathi izikhumbuzo zomlando kanye resort kakhulu ukuthi esenza sibe nendawo uhambo oluya endaweni. Izivakashi boom eTurkey iminyaka engu-16, futhi phakathi naleso lokhu ekhoneni ukhohliwe, ukusekelwa umlando esifundeni kakhulu yasendulo, iye yaba yiparadeyisi for amaholide.
Ngo Alanya okumbalwa obungenakuphikwa kuqhathaniswa nezinye izindawo zokungcebeleka ogwini, main umuntu oyedwa, of course, iyona cheapness isihlobo kuhlala izindawo (10-15% ukaleso emadolobheni imfashini kakhudlwana).
Izinzuzo undoubted, ngaphezu kwenani elikhulu izikhumbuzo zomlando namasiko, phakathi okuyinto iparele Red Tower, uyalandisa inani lezinsuku libalele ngonyaka (300), okuyinto kakhulu bandisa isizini izivakashi.
Zonke 300 amahhotela imiphetho, kahle etholakala ezindaweni resort 6, bakulungele ukunikeza izivakashi a indawo yokuhlala ntofontofo ngamanani neze kulokho. Lezi osebenza ngokugcwele 3-LAN "Drop-hotel". Turkey in the 90s yekhulu lamashumi amabili, baba sibonga abadumile kuye. Yakhelwe ngomunye wabokuqala ogwini (1997) kanye emelela ekuqaleni esifundeni buyekeza, namanje budonsa izivakashi.
Kungakhathaliseki ukuthi, ngasiphi ibanga (amakhilomitha angu-12) kusukela maphakathi sifundazwe kufanele "Beka-hotel". Turkey inikeza izivakashi zalo okuzothileyo nokungcebeleka emangalisayo nganoma yingasiphi.
Kukhona 56 amakamelo yesimanje ukhululekile (20 wabo - olulodwa), okuyinto hlala 5 izibuya izindlu. Le ndawo Imininingwane eyinkimbinkimbi hhotela 5000 sq.m., evumela ukuhlala nabaningi izindawo zokuzijabulisa yekwentiwa. Lezi zihlanganisa:
amachibi ezimbili ukubhukuda (omdala ongaphandle nezingane);
epaki amanzi nge-slide;
football futhi mini enkundleni yomdlalo webhola;
ingadi encane nge izihlahla zezithelo;
ithala ukukhanyisa esiyingqayizivele.
eliphakeme service inikeza "Drop-hotel". Turkey Yaziwa service lihle - okugeza Turkish, sauna, izithombe, amabhiliyade, ithenisi, igumbi isevisi - ehlinzekelwe ku yiliphi ihhotela yezwe.
Ngaphezu kwalokho, lolwandle izambulela, omatilasi kanye lounge izihlalo esisogwini lolwandle yangasese okuqondene ehhotela, ububanzi 150 kanye nobude 200 meters, banikwa kumakhasimende mahhala.
Kulabo abathanda ukuhamba imali, i choice omuhle kuyinto Turkey (Alania). Ihhotela "Drop" kuzothatha izivakashi isiko izihambi.
Ukudla ukunikeza izivakashi zokudlela ezimbili (nangaphandle - izihlalo ezimbili 200), Amabha amathathu nge ezihlukahlukene enkulu iziphuzo. Yiqiniso, zikhona izindawo lapho ungazama eyiqiniso ikhofi Turkish netiye.
Ukuze bakwazi ukuncintisana, ihhotela inikeza ngamasevisi alandelayo abalulekile:
amakamelo anemisila satellite TV;
zonke izinhlobo zokuxhumana for amaholide;
nizungeze zokuxhumana iwashi nabasebenzi kanye ehhotela.
Konke okungenhla futhi abaningi service ezengeziwe izixazululo inikeza "Drop-hotel". Turkey Sekuyisikhathi eside kwaziwa zenkonzo yalo.
izivakashi eziningi ivela zakhe, abathanda ukwabelana nakho on ezithangamini ezehlukene futhi ukuxhumana nomphakathi. Kaningi kukhona amanothi wavakashela "Drop-hotel" (Turkey). Izibuyekezo zihlukile, ngoba isibalo izivakashi mkhulu. Yingakho lesi siphetho: kungcono woza uzobona yonke into ngokwakho.
Uyini imbobo-ozone nokuthi zingayisongela
Hychiny nge inyama: iresiphi
Izifo zamajuba: ukwelashwa nokuvimbela